Waa Kuma Ninka Hogaamin Doona Siyaasadda Arrimaha Dibadda Ee Mareykanka? – Borama News Network
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu Xoghayaha Arrimaha Dibadda u magacaabay Antony Blinken, xilkaas oo ah kan ugu muhiimsan siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkaasi.
58-jirkan ayaa hore u soo noqday kuxigeenka Xoghayaha Arrimaha ee Mareykanka iyo kuxigeenka lataliyaha ammaanka qaranka ee maamulkii madaxweyne Barrack Obama, markaas oo Mr Biden uu ahaa madaxweyne ku xigeen.
Sidoo kale waxa uu hore u soo qabtay xilal sarsare oo arrimaha dibadda la xiriira oo uu ka soo kala qabtay Capitol Hill, Aqalka Cad iyo Wasaaradda Arrimaha Dibaddaba.
Waxaa la filayaa inuu maamulo ajandaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Joe Biden taas oo markale diiradda lagu saari doono sidii wadashaqeyn dhow uu dalkaas ula yeelan lahaa xulafada reer Galbeedka.
Markii uu madaxweynaha la doortay ee Mareykanka uu shaaciyay in Mr Blinken uu hogaamin doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Blinken waxa uu farriin soo dhigay bartiisa Twitterka.
Waxa uu u mahadceliyay saaxiibada iyo dadka ay shaqo wadaaagga yihiin ee farriimaha hambalyada ah u soo dirayay.
Waxa uu farriintaas ku sheegay inay sharaf u tahay inuu si rasmi ah ugu dhawaaqo in loo magacaabay inuu noqdo Xoghayaha Arrimaha Dibadda. Waxa uu intaasi ku daray in haddii jagadaas loo xaqiijiyo uu howlgalkaas si buuxdo uga soo dhalaali doono.
Waa kuma Antony Blinken?
Antony Blinken ayaa soddonkii sanadood ee la soo dhaafay waxa uu soo qabtay xilal sarsare oo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxa uuna madaxweynaha la doortay Joe Biden kala talinayay siyaasadda dibadda tan iyo 2002-dii.
2015-kii illaa 2017-kii, Blinken waxa uu maamulkii madaxweyne Barrack Obama u ahaa kuxigeenka Xoghayaha Arrimaha Dibadda, halkaas oo uu Blinken gacan ka gaystay dagaalka ka dhanka ah ururka la baxay Dowladda Islaamiga ah, dhibaatada qaxootiga ee caalamka iyo arrimo kale.
Mudadaas ka hor Blinken waxa uu caawiye u ahaa madaxweynaha sidoo kalana waxa uu ku xigeen u ahaa lataliyaha Ammaanka Qaranka ee Madaxweyne Obama. Muddo xileedkii koobaad ee madaxweyne Obama, Blinken waxa uu lataliyaha Ammaanka Qaranka u ahaa Madaxweyne-kuxigeen Joe Biden.
Blinken waxa uu intii u dhaxaysay 2002-dii illaa 2008-dii soo noqday Agaasimaha shaqaalaha Xisbiga Dimuqraadiga ee Guddiga Xiriirka Dibadda ee Senate-ka Mareykanka, waxa uuna ka soo mid noqday shaqaalaha Golihii Ammaanka Qaranka ee Madaxweyne Bill Clinton intii u dhaxaysay 1994-tii illaa 2001-dii.
Ka hor inta uusan lataliyaha siyaasadda dibadda u noqon ololihii Biden-Harris iyo xil la wareegiddooda, ayuu Blinken waxa uu Agaasime u soo noqday Xarunta Dimuqraadiyadda iyo Wadahadalka Caalamiga ah ee Penn Biden.
Madaxwayne Mustafe Cagjar Oo Kulan La Qaatay Odayaasha Deegaanka Gaashaamo
Ex Madaxwayne Xasan Sheekh” Nooma Muuqato Doorasho La Wada Ogol Yahay”
Bnnstaff Bnnstaff October 2, 2020 October 2, 2020